Sidee Loola Macaamilaa Bahdilka Goobaha Shaqada? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Waxaa jira dhibaatooyin badan oo ka jira goobaha shaqooyinka kuwaas oo aan halkaan lagu soo koobi karin. Dadka qaar wey iskeega qancaan dhibaatooyinka kasoo wajaha goobaha shaqada ayagoo u cabsi qaba in shaqada laga ceyriyo ama ay iska aamusaan ayagoo ka cabsi qaba sharaf xumo keeni karta isqabqabsi.
Laakiin bani’aadamka iskumid ma ahan ee qaar waxaa jira aanan u adkaysan karin isla markaana hadla ama dacwad ka gudbiya.
Haddii laga fiiryo dhinaca caafimaadka ma ahan wax wanaagsan inaad dhibaato ku haysato aad iskeega aamusto, maxaa yeelay waa qayb weyn oo ka mid ah caafimaadkaaga jireed iyo maskaxeed. Waxayna keentaa diiqadda iyo gubashada ay dad badani la kulmaan.
Daan-daansiga shaqada waa nooc ka mid ah qofka oo si maskixiyan ah loola dagaalamo, arintan waxay noqon kartaa qofkoo la xanto, qofka wuxuu qabtay oo la yaso, qofkoo shaqo uusan u qalmin loo diro, qofka oo qiimihiisa hoos loo dhigo, shaqada oo qofka lagu dhibo, qofka oo la faquuqo ama si xun loola dhaqmo.
Daan-daansiga shaqada loolama jeedo wax walba oo iska hor imaad ah oo shaqada ka dhaca. Daandaansiga ama bahdilku waa marka uu yahay mid qofkaas lagu beegsanayo ama mudo dheer socdey, isla markaasna loogu talo galay. Daan-daansigaas qofku wuxuu u dareemi karaa si cirriiri ah, xumaan iyo qiimo la’aan ah. Loo shaqeeyaha ama shaqo bixiyaha waxaa xaq loogu leeyahay inuu arintaas oo kale wax ka qabto.
Dhibaatooyinka qaar aad ayey u culus yihiin waxaana kuu wanaagsan inaad si dhaqso leh aad u wargelisaa madaxa shirkada ama ururka aad markaas la shaqeynayso.
Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay goob ammaan ah oo caafimaad leh, oo ka madax bannaan xoogsheegashada, dhibaataynta iyo takoorka. Haddii ay jiraan dhibaatooyin kaa soo wajaha goobta shaqada ama haddii aad dareemayso culeys, rabshad ama arrimo aanan nabadgelyo lahayn waxaa kuu wanaagsan inaad si taxadir leh u wargeliso masuuliyiinta kaa sarayso.
Daan-daansiga goobaha shaqada ka dhaca waxaa loo baahanyahay in isla markiiba wax laga qabto. Sida ugu dhaqso badan ee arinta wax looga qabto ayey ku xiran tahay in dhibka la soo af-jaro. Daan-daansiga oo waqti dheer socda wuxuu qofka dhaxalsiin karaa culeys badan oo maskaxeed kaas oo keeni kara niyadjab.
Daan-daansigaas waxaa lagala hadli karaa qofka sameynaya si khaas ah ama isagoo uu xaadir yahay madaxa goobta shaqada ama qofka metela shaqaalaha. Dhammaan masuuliyiintan waa in ay la socdaan haddii goobta shaqada ay ka jirto daan-daansi ama bahdil.
Haddii daan-daansigaas laga qabto shir, codso in laga qoro xusuus-qor. Kaydi dhammaan fariimaha la xiriira daan-daansiga sidoo kale haddii ay jiraan saaxiibo shaqada oo arintaas dareemay kala hadal. Marka laga reebo inay dadkaasi yihiin markhaatiyaal muhiim ah, haddana waxaa laga yaabaa in qof dadkaas ka mid ahi uu la kulmay daan-daansigaas oo kale adna aadan ogeyn.
Waxaan shaki ku jirin in arrimo shaqsiyeedka sida dhibaatooyinka qoyska, xaaladaha nolosha beddela, dhibaatooyinka shucuurta iyo jirrada ayaa saameyn ku yeelan kara shaqadaada iyo ugu dambeyntiina awoodda aad u leedahay inaad horumariso xirfaddaada.
Waa muhiim in qofka la daan-daansaday uu arintaas kala hadlo dad kale. Marka qofku uu arrintaas kala hadlo saaxiibada shaqada, saaxibadiisa kale ama xubno ka mid ah reerkiisa waxaa u suuroobaysa in arrinta uu fahmo.
Haddii arintu ay sii socoto waxaa aad u muhiim ah in qofku uusan arinta ku kaliyeysan ee uu ka hadlo. Haddii arrintu ay sii adkaato waxay noqon kartaa mid cudur ama dhibaato, ku noqota qofka, taas oo isu badeli karta hurdo la’aan, qofka oo cirriiri dareema ama xannuun aan sabab loo helin.
Haddii aadan rabin shaqaalaha kula shaqeynaayo inay ogaadaanin waxyaabaha adiga qaaska kuu ah, sir nololleedkaaga kamid ah ee ka baxsan shaqada, hadaba waa inaad barataa sida loo xafido sirta.
Qof walba wuu xanaaqaa. Dadka qaar si dhakhso leh ayey uga jawaab celiyaan waliba qaab xun oo xanaaq ku jira. Dadka qaar waxay maareeyaan xanaagooda waxayna u wajahaan si deggan oo macquul ah. Sidaas awgeed, waa lagama maarmaan inaad maareyso dareenkaaga shaqsiyadeed.
Dadka qaarkiis waxay muujiyaan diidmo ah inaysan shaqada usoo jeedin. Ma jecla shaqooyinkooda ama ma jecla shirkadooda. Waxaa laga yabaa in maamulayaasha shirkadooda ula dhaqmaan si aan caddaalad lahayn. Si aad ugu guuleysato shaqada, si kastaba ha noqotee, waa inaad barataa sida loola macaamilo shaqaalaha xun.
Tags: Sidee Loola Macaamilaa Bahdilka Goobaha Shaqada?
Next post Goormaa Caawinaad Loo Baahan Yahay? - Caafimaadka dhimirka
Previous post Qaxooti Badan oo Noorwiiji ah Ayaa Dhameeya Dugsiga Sare Marka La Barbardhigo Denmark iyo Finland